Suuqgeyntaada Dibedda ah ayaa waxtar yar haddii aan lagu bixin dadaallada | Martech Zone
Suuqgeyntaada Dibedda ah waa mid aan waxtar badan lahayn oo aan lahayn dadaallada gudaha
Arbacada, Juun 8, 2016 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Haddii aad akhristayaal bloggeyga muddo dheer ahayd, waad ogtahay ereygaas oo ay kasoo horjeeddo badiyaa waxay ii dirtaa ciil indha la '. Dadka waawayn ee SoftwareAdvice waxay u direen maqaal faahfaahsan, Inbound vs Outbound Marketing: Hordhac loogu talagalay Newbies ama Switchers.
Tilmaamuhu wuxuu qabtaa shaqo aad u fiican oo ku dhex socodka xeeladaha, kala duwanaanshaha, iyo xitaa aaladaha istiraatiijiyadda soo-galidda iyo xeeladaha dibedda. Runtii waa u qalantaa akhrinta ee iska hubi. Waa tan mid ka mid ah sawirada:
Dibad bixintu waxtar yar ma leh Soo-gal la'aan
Waxaan lashaqeynaa ururo kuwa yar yar oo bilaaba ilaa shirkadaha shirkadaha. Ma jiraan wax ka reeban sharcigan aan wadaagayo:
Suuqgeynta dibedda waxtarkeedu waa yar yahay iyadoo aan la helin xeelado suuq-geyn gudaha ah
Miyaad sameyn kartaa wicitaan-qabow oo aad shakhsi ahaan kobcin kartaa xiriir (dibedda) oo iibso? Dabcan! Ma dhihin bixitaanku waxtar malaha istiraatiijiyooyinka soo-galidda, waxaan sheegay inay tahay waxtar yar.
Maxaad u maleyneysaa waxa ugu horreeya ee macaamil ama ganacsi ganacsi uu sameeyo ka dib marka uu ka barto ganacsigaaga warqad toos ah, wicitaan qabow, ama booqasho? Xaqiiqdii, maxaad u maleyneysaa inay sameynayaan inta ay ka baranayaan ganacsigaaga warqad toos ah, wicitaan qabow, ama booqasho?
Hogaamiyaashaada Dibad Baxu waxay kugu baarayaan khadka tooska ah!
Raadinta fudud ee Google si loo helo goobtaada oo loo ogaado waxa ku jira waxay badanaaba raaci doonaan wicitaan qabow. Kadibna waxay aadayaan LinkedIn oo ay dib u eegaan aqoonsigaaga iyo inaad u egtahay iyo inkale mid sharci ah. Kadibna waxay ku gaarayaan warbaahinta bulshada shabakadooda ay ku kalsoon yihiin waxayna weydiinayaan, Ma jiraa qof waligii la shaqeeyey dadkan?
Taasina waa xilliga muhiimka ah ee ah in kooxdaada dibedda u baahan tahay inay booqashooyin badan ku bixiso si ay u kobciso hoggaaminta, u isticmaasho cadaadis qosol leh si loo xiro iibka, ama ay kuu lumiso tartan kaas oo shaqo aad u fiican ka qabanaya suuqgooda soo gala.
Dhawaan ayaan wadaagnay maxaa CMOs waxay ka raadinayeen hay'adahooda, iyo laba dhinac oo kala ahaa aqoon iyo kaalmo. Haddii shirkaddaada, wax soo saarkaaga, ama adeeggaagu aysan si fiican uga wakiil ahayn raadinta, warbaahinta bulshada, iyo iyada oo loo marayo si adag maktabadda, Fursadahaagii xirida iibka way yaraadeen.
Kaaga darane, haddii tartamayaashaadu ay si fiican u matalayaan, hadda waxaad heshay rajo kulul oo bilaabi doonta dukaamaysiga. Marka ay dib u eegaan booskaaga tartame booska aan caadiga ahayn iyo hogaaminta booska, waxay yeelan doonaan shaki ah inay adeegsan karaan iyo inkale.
Iyo Dibad Baxu Waxay Kordhiyaan Dadaalada Soo Galida
Waxaan halkan ku dari doonaa jawharad kale… soo-galitaanku aad ayuu uga waxtar badan yahay suuqgeynta dibadda, sidoo kale! Weligaa maku wacday rajo laga soo dejiyay dhowr shey, oo si firfircoon u furaya una gujinaya joornaalada emailkaaga oo booqanaya bartaada xilliyo?
Maaha oo ay kasoo horjeeddo, dadweynow! Dadaalladaada suuq-geynta dibedda ah waxay si aad ah ugu sii kordheysaa istiraatiijiyad suuq-geyn gudaha ah oo aad u fiican. Istaraatiijiyaddaada suuq-geynta gudaha ah ayaa horumarin doonta markaad u isticmaasho xogtaas si aad u huriso istiraatiijiyaddaada suuq-geynta dibedda.
Tags: marketing inboundhagaha suuq geyntasoo galid iyo dibed baxinbound vs outboundsuuq geyn dibedda ahhage suuq geyntatalobixintaoo ay kasoo horjeeddovs
Jun 9, 2016 saacadu markay ahayd 2:27 AM
Waad ku mahadsantahay aqoonta. Gudaha ama dibedda, suuqgeynta ayaa qeyb muhiim ah ka ah ganacsiga oo dhan la’aantiisna meelna kama tihid warbaahinta.
Sep 21, 2017 at 6: 26 AM
Soo-galitaanku halkaas ayuu in muddo ah joogey oo aannaan aqoonsanayn sababta oo ah muhiimadda la siiyay suuq-geynta dibadda. Maaddaama Internetku ku faafay guri kasta, way adag tahay in la diido gaadhista ballaadhan iyo saamaynta suuq geynta.